Man United Oo Haaland Ka Dhigatay Bartilmaameedkooda Ugu Weyn Suuqa Xagaaga – Garsoore Sports
Manchester United ayaa go’aansatay in weeraryahanka Borussia Dortmund Erling Haaland uu noqon doono mudnaanta koowaad xagaagan iyagoo doonaya inay la soo wareegaan weeraryahan cusub.
United ayaa si joogta ah loola xiriirinayaa weeraryahan kasta oo adduunka ka jira maalmahan, weeraryahanadii ugu dambeeyay ee lala xiriiriyo waxaaa kamid ah Andre Silva oo Eintracht Frankfurt ka tirsan iyo Harry Kane oo Tottenham ah.
Iney lasoo saxeexdaan weeraryahan cusub ayaa ku kamid ah liiska waxyaabaha ka dhacaya Old Trafford xagaaga, iyadoo United aysan hubin in Anthony Martial ama Edinson Cavani ay heystaan ​​waxa ay uga baahan yihiin si ay u noqdaan weeraryahanno la isku halleyn karo,.
Tan iyo markii John Murtough loo magacaabay agaasimaha kubbada-cagta ee kooxda, ahmiyadda ayaa loo weeciyay bartilmaameedyo suurtagal ah.
Sida laga soo xigtay Manchester Evening News, wadahadallo kooxda dhexdeeda ah ayaa lagu go’aansaday in Haaland uu Hormuud u noqdo liiskooda bartilmaameed kaasoo uu aad u doonayo tababare Ole Gunnar Solskjaer.
United ayaa dooneysay Haaland bishii Janaayo 2020 laakiin ugu dambeynti waa ay waayeen addeegiisa. Balse kalkan ayay awoodooda isagu geeynayaan saxiixiisa.
Laacib Ay Raadinayaan Man United & Barcelona Oo Laga…